पूर्वाग्रह होइन प्रेम देखाउनुहोस्‌
ब्यूँझनुहोस्! | सङ्ख्या ३ २०२०
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको ईवी उङ्गान्गेला उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो कन्नडा काजाक काजाक (अरबी) काबुभरदियानु किकाओन्डे किकोंगो किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्युबान साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गारीफुना गिटोंगा गुजराती गून ग्रीक चाङगाना (मोजाम्बिक) चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुवाबो चेक चोल जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापटेक (इस्मस) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली डच डुआला डेनिश ताजिकी तामिल तारास्कान तेलगु तोक पिसिन त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिजियन फिनिश फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बासा (क्यामरून) बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोङ्गा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लुभेल लो जर्मन वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
पूर्वाग्रही भावना तुरुन्तै बिलाएर जाँदैन। जसरी शरीरमा भाइरस फैलिएपछि निको हुन समय र प्रयास चाहिन्छ, त्यसैगरि पूर्वाग्रही भावना हटाउन पनि समय र प्रयास चाहिन्छ। आफूमा भएको पूर्वाग्रही भावना हटाउन तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ?
“प्रेम धारण गर किनकि यो मानिसहरूलाई एकतामा पूर्ण रूपमा गाँस्ने बन्धन हो।”—कलस्सी ३:१४.
यसबाट के सिक्न सक्छौँ? अरूको लागि केही गरिदिँदा उनीहरू हामीसित नजिकिन्छन्‌। हामी जति धेरै प्रेम देखाउँछौँ पूर्वाग्रही भावना त्यति नै हराउँदै जान्छ। अरूलाई प्रेम गर्न सिक्यौँ भने उनीहरूप्रतिको नकारात्मक भावना कम हुँदै जानेछ।
तपाईँको मनमा कुनै समूहप्रति नकारात्मक भावना आएको हुन सक्छ। त्यस समूहका मानिसहरूलाई प्रेम देखाउन सकिने केही खास तरिकाबारे सोच्नुहोस्‌। यस्ता कामहरू गर्न विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ भन्‍ने छैन। तल उल्लेख गरिएका कामहरू गर्न कोसिस गर्नुहोस्‌:
प्रेम देखाउन गर्नुहुने प्रत्येक सानो कामले तपाईँलाई पूर्वाग्रही भावनाबाट अलग हुन मदत गर्नेछ
उनीहरूले खोजेको ठेगाना देखाइदिएर वा सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट छोडिदिएर उनीहरूसित राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्‌।
उनीहरूले तपाईँको भाषा राम्रोसित बोल्न नसके तापनि उनीहरूसित कुराकानी गर्नुहोस्‌।
उनीहरूले अनौठो व्यवहार गर्दा धीरजी हुनुहोस्‌।
उनीहरूले आफ्ना समस्याहरूबारे बताउँदा समानुभूति देखाउनुहोस्‌।
सत्य घटना: नाजेरी (गिनीबिसाउ)
“मेरो मनमा कुनै समय आप्रवासीहरूप्रति पूर्वाग्रही भावना थियो। तिनीहरू सरकारबाट पैसा वा अन्य सहयोग पाउन झूट बोल्छन्‌ र तिनीहरूमध्ये धेरैजसो आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्‌ भनेर मैले सुनेकी थिएँ। यसले गर्दा मलाई तिनीहरूसित मित्रैलो व्यवहार गर्न गाह्रो लाग्थ्यो। तैपनि मलाई आफूले पूर्वाग्रही भावना राखेको जस्तो लाग्दैनथ्यो किनकि आप्रवासीहरूलाई धेरैजसो मानिसहरूले त्यस्तै दृष्टिकोणले हेर्थे।
“समय बित्दै जाँदा आप्रवासीहरूप्रति मैले राखेको त्यस्तो नकारात्मक दृष्टिकोण वास्तवमा पूर्वाग्रह हो भन्‍ने महसुस गरेँ। बाइबलबाट पाएको व्यावहारिक शिक्षाबाट मैले तिनीहरूसित मायालु व्यवहार गर्न मदत पाएकी छु। अहिले म तिनीहरूलाई पहिलाजस्तो बेवास्ता गर्दिनँ बरु अभिवादन गर्छु र तिनीहरूसित कुराकानी गर्छु। म तिनीहरू प्रत्येकलाई राम्रोसित चिन्‍ने कोसिस गर्छु। अहिले म तिनीहरूप्रति सकारात्मक भएकी छु र तिनीहरूसित निकै सजिलो महसुस गर्छु।”
“म अन्यायविरूद्ध लड्‌न चाहन्थेँ”
अन्यायविरूद्ध लड्‌न राफिका बहिनी एउटा क्रान्तिकारी समूहको सदस्य बनिन्‌। तर यहोवाका साक्षीहरूको अधिवेशनमा उपस्थित भएपछि तिनले आफूले खोजिरहेको एकता पाइन्‌।
राफिका मोरिस: म अन्यायविरूद्ध लड्‌न चाहन्थेँ भिडियो हेर्नुहोस्‌। jw.org/ne मा यो भिडियो खोज्नुहोस्‌।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रेम देखाउनुहोस्‌
g20 सङ्‌ख्या ३ पृ. १२-१३
पूर्वाग्रह—के तपाईँमा विकास भएको छ?
सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुहोस्‌
अरूको असल गुणहरूमा ध्यान दिनुहोस्‌
आफूभन्दा फरक व्यक्‍तिहरूलाई साथी बनाउनुहोस्‌
पूर्वाग्रहमाथि विजय हासिल गरेकाहरू
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प ब्यूँझनुहोस्! के पूर्वाग्रह हटाउने कुनै उपाय छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने ब्यूँझनुहोस्! के पूर्वाग्रह हटाउने कुनै उपाय छ?
के पूर्वाग्रह हटाउने कुनै उपाय छ?
ब्यूँझनुहोस्! के पूर्वाग्रह हटाउने कुनै उपाय छ?